Sina 1350KG, 1500KG karazana mpanamboatra sy mpamokatra rafitra manetsika | Meiko Magnetics
1350KG na 1500KG karazana rafitra famolavolana andriamby miaraka amin'ny akorandriaka vy dia karazana fahaiza-manao mahazatra ihany koa amin'ny fanamboarana plateform precast, izay tena ampirisihina hampiasaina amin'ny fanamboarana ny sidemould amin'ny takelaka sandwich vita amin'ny beton. Afaka mifanaraka tsara amin'ny formwork vy na formwork vita amin'ny hazo plywood izy io.
1350KG na 1500KG Magnetic Formwork System dia karazana fahaiza-manao mahazatra ihany koa ho an'ny fanamboarana ny takelaka vita amin'ny beton mialoha, izay tena amporisihina hampiasaina amin'ny fanamboarana sidemould amin'ny takelaka sandwich vita amin'ny beton. Izy io dia afaka mifanaraka tsara amin'ny volavola vy na volavolan-trondro vita amin'ny hazo, miaraka amina adaptatera samihafa na bolt press.
Aorian'ny fanerena ny bokotra dia mitazona mafy ny latabatra ireo andriamby boaty. Mora ny mametaka ny lovia vy amin'ny lovia hazo amin'ny fantsika, azo alefa amin'ny alàlan'ny fanindriana fotsiny ny bokotra amin'ny tanana na amin'ny tongotra. Mba hamonoana azy ireo dia avoaka mora foana ny andriamby amin'ny alàlan'ny vy (hametahana ny bokotra). Amin'ny toerana tsy miasa dia azo esorina mora foana avy eo amin'ny endrika latabatra ny andriamby manidy. Ireo andriamby simenitra mialoha dia azo ampiasaina irery na mifandray amin'ny adpator hanamboarana ny formwork. Raha ny tokony ho izy 1350Kg andriamby boaty hery mitsangana dia mety tsara amin'ny famokarana tontonana 80-150mm rindrina matevina. Azontsika atao ihany koa ny manfuacture andriamby boaty herin'aratra hafa, na dia 2500KG, karazana 3000KG aza araka ny takinao.
Noho ny fanandramana manankarena amin'ireto tetik'asa simenitra precast 'manaraka ireto, izahay Meiko Magnetics, dia mahay mamolavola sy mamokatra vahaolana maivana rehetra ho an'ny ozinina singa simenitra precast, tsy maninona na andriamby boaty, andriamby nampidirina, andriamby fantsom-batana, fitsaharana andriamby taloha na andriamby hafa rafitra amin'ny fampiharana mialoha.
Teo aloha: 900KG, Magnet Box 1Ton ho an'ny fanamboarana ny latabatra fametahana latabatra mialoha
Manaraka: Magnetsera fanapahana 1800KG miaraka amin'ny bokotra on / off ho an'ny rafitra fanamboarana trano efa vita mialoha
1.5Ton Capnity Button andriamby
1350Kg Box Magnet
1350KG Magnet Concrete Precast
1350KG Magnet mamono
Andriamby Box 1500KG
1500KG Box Magnetika
1500KG karazana andriamby boaty
450KG Magnet Box misy bokotra Push-pull
900KG, Magnetsan'ny boaty 1Ton ho an'ny tabilao mialoha ...